काठमाडौं उपत्यका तुवाँलोले ढाक्यो; घरबाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अपिल
गोठालो खबर -३ २०७७ चैत १४, शनिबार,०९:५४:AM
काठमाडौं, १४ चैत्र। काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (एयर क्वालिटी इन्डेक्स–एक्यूआई) जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक तहमा पुगेको छ। उपत्यकाका अधिकांश भेगमा एक्यूआई तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ।
चितवन, मकवानपुर, ओखलढुंगा, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा डढेलो लागेकाले ती भेगबाट धूवाँ मिश्रित वायु उपत्यका भित्रिएकाले एक्यूआई खस्किएको विज्ञको बुझाइ छ। भारतको हरियाणा, उत्तर प्रदेशलगायत भेगमा बढेको प्रदूषणको प्रभावसमेत नेपालसम्म देखिएको उनीहरूको ठहर छ।
वायु गुणस्तर बिहीबारको तुलनामा शुक्रवार निकै खस्किएको छ। ललितपुरको भैंसेपाटी, भक्तपुर, काठमाडौंका रत्नपार्क, कीर्तिपुरलगायत भेगमा एक्यूआई बढेको छ। ‘एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वायु गुणस्तर खस्किन थालेको छ। शुक्रवार झनै खस्कियो’, वातावरण विभागका सिनियर केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले भने।
शुक्रवारको गुणस्तर कुन हदमा पुग्यो भन्ने सुनिश्चित गर्न पछिल्लो २४ घण्टाको समग्र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी प्रदूषणको मात्रा भैंसेपाटी र आसपासमा रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। बिहीबार सो भेगमा २४ घण्टाको एक्यूआई २३६ थियो। ‘शुक्रवारको मौसमले त्यहाँको एक्यूआई चार सयभन्दा तल नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, विभागका एक अधिकारीले भने।
जनस्वास्थ्यका दृष्टिले एक्युआई ५० देखि सयसम्मलाई सामान्य मान्ने गरिन्छ। तराईका भू–भागबाट बागमती कोरिडोर हुँदै उपत्यका भित्रिने प्रदूषित वायुले हिजोआज काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर खस्काएको विज्ञहरूको ठहर छ। एक्युआई दुई सयभन्दा बढी नाघेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य अनुकूल मानिँदैन। बिहीबार भक्तपुरमा एक्यूआई २ सय ७ थियो, कीर्तिपुरमा १ सय ९९ र रत्नपार्कमा १ सय ८३ थियो।
प्रि-मनसुनका बेला हुने क्षणिक वर्षा र सक्रिय हुनुपर्ने वायु निष्क्रिय भएकाले अहिले प्रदूषणको मात्रा बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उपत्यकाबाहिर सिमरा र सौराहमा एक्यूआई निकै बढेको वातावरण विभागले जनाएको छ। सिमरामा एक्यूआई ३ सय ४८ र सौराहको २ सय ८२ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ।
तुवाँलोले उडानमा असर
बाक्लो तुवाँलोको कारण शुक्रवार आन्तरिक तथा बाह्य उडान प्रभावित बनेको छ। भिजिबिलिटी कम भएका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध भएको हो। दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान दिल्ली एयरपोर्टमा डाइभर्ट भएका छन् भने २० वटा आन्तरिक उडान रद्द भएका छन्। भिजिबिलिटी कम हुँदा ८ वटा आन्तरिक उडान डाइभर्ट भएका छन्।
शुक्रवार मध्याह्नदेखि लागेको बाक्लो तुवाँलोका कारण दिउँसो ३ घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै उडान ठप्प भएको थियो। भिजिबिलिटी १ हजार मिटरभन्दा कम भएका कारण दिउँसो २ बजेदेखि ४ः४५ बजेसम्म उडान अवरुद्ध गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए। विमानस्थल ठप्प भएको समयमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको जहाज आधा घण्टा आकाशमा होल्ड गरेर काठमाडौं अवतरण गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। भिजिबिलिटी कम भएकोले एयर इन्डियाको उडान निर्धारित समयभन्दा ढिला काठमाडौंबाट उडेको थियो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको डढेलोको कारण भरतपुर विमानस्थल बिहानैबाट खुल्न सकेको थिएन। तुवाँलोको कारण सबैभन्दा बढी पोखरा उडान रद्द हुन पुगेको बताइएको छ। यस्तै सिमरा र विराटनगर उडान पनि रद्द भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।
भिजिबिलिटी करिब १६ सय मिटर पुगेपछि विमानस्थलमा जहाज अवतरण सुरु गरेको विमानस्थलका महानिर्देशक प्रतापबाबु तिवारीले बताए। तुवाँलोका कारण क्याथे प्यासफिक र फ्लाई दुबईको उडान भारतको दिल्ली डाइभर्ट भएको थियो। जहाजहरूको आवश्यकताअनुसार मात्रै उडान तथा अवतरण गर्ने हुँदा केही बाह्य उडान डाइभर्ट भएको तिवारीले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रवार अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण धुम्मिएको मौसम। चितवन, मकवानपुर, ओखलढुंगा, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा डढेलो लागेकाले धूवाँ मिश्रित वायु भित्रिएकाले वायु गुणस्तर खस्किएको विज्ञले बताएका छन्।
‘११ सय भिजिबिलिटीमा नै नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स काठमाडौं अवतरण गरेका हुन्। तर, २८ सय, ३२ सय भिजिबिलिटी चाहिने फ्लाई दुबई, क्याथे प्यासफिकजस्ता उडान काठमाडौं अवतरण गर्न नसकी डाइभर्ट भएका छन्।’ महानिर्देशक तिवारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेका कारण घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ। मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले श्वासप्रश्वासमा कठिनाइलगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखापर्न सक्ने जनाएका छन्। खुला स्थानमा नबस्न, नखेल्न र मर्निङ वाकमा नजान डा. अधिकारीले आग्रह गरेका छन्।
‘घरबाहिर गएर शारीरिक व्यायाम गर्ने गरिएको छ भने रोकौँ। घरभित्रै बसौँ। घरभित्रै व्यायाम गरौँ। बालबालिका, दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गरौँ’, अपिलमा भनिएको छ। अत्यावश्यक नभई सवारीसाधन नचलाउन र पेसा, व्यवसाय निर्माण कार्य सुचारु गर्दा धुलो धूवाँ नउड्ने वा कम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने तर फोहोर जलाउने कामलाई निरुत्साहित गर्न र बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ। धुलो, धूवाँ उड्ने खालका पेसा, व्यवसाय, निर्माण कार्य केही दिनलाई स्थगन गर्न, गराउन मन्त्रालयले भनेको छ।
केही दिनपछि त्यस किसिमका पेसा, निर्माण कार्य सुचारु गर्दा धुलो, धूवाँ नउड्ने वा कम हुने व्यवस्था गराउन आग्रह गरिएको छ। घरबाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था आएमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न कोभिड-१९ का लागि तोकिएका जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन अपिल गरिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट